Jockstrap chinhu chinokosha chekupfekedza murume wese mupfeko yake. Pakuvamba yakasikwa kuitira mitambo yeVatambi muZ1930 pakutanga iyo inonzi Jock straps, Jockstraps yakave yakagamuchirwa zvikuru neveGay nevechikadzi nekuda kwekuti vanonyanya kufara sei.
eGay's Jockstrap's inopa nyaradzo huru, inouya mumitambo yakawanda, mavara, mavara uye maumbirwo zvichienderana nechinangwa chaunoshandisa Jockstrap yako. Jockstraps yatinotengesa paGay.shop inoitwa nemaoko, yakagadzirisa uye inopa ruzivo kune zvaunoda zvepabonde zvinosarudzwa.
Kazhinji varume vanopfeka Jockstraps yekunakidza pane kutamba mitambo vanoziva sevamwe vanoita basa muimba yekurara. Kugadzirwa kweJock straps yatinotengesa kuGay kukurudzira muviri wako munzvimbo dzose dzakarurama uye kunoitwa nemaoko kunovimbisa hupi hwakanakisisa hwakagadzirirwa kupedza nguva yekuedzwa.
Jockstraps akavewo akaonekwa semhando yakachengeteka yepurasitiki sezvo inobvumira mabhora evanhu kuti vadzike pasi asi panzvimbo, izvo zvinodzivirira kuti vasapwanyika.
Kutenga a Jockstrap kubva kuGay.shop iri kubatsirawo mharaunda yako yemunharaunda pasi rose se5% yezvose zvakabhadharwa inopiwa kune zvipo zvevamwe vanoita zvepabonde munyika yose. Kutenga kwako kuri kuita kuti kuve nekuenzana kwevamwe vasikana vanoita gay.
Zvitengere iwe Jockstrap kubva kuGay.shop nhasi uye uzvipfeke nokuzvikudza!